မြန်မာနိုင်ငံအား R2P ရန် ကျင်းပဆဲ ကုလအထွေထွေညီလာခံက မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည်ဆိုသော သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ဆဲ၊ ဖြစ်နိုင်သည်များကို တင်ပြရလျှင် – H2Oupdatenews
ယမန်နေ့ Facebook တွင် မြန်မာလူမှု့ကွန်ယက်အသုံးပြုသူများအကြား လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လျှက်ရှိသော သတင်းများမှာ ( ၁ ) လက်ရှိကျင်းပဆဲ ၇၄ ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား R2P အရစစ်ရေးဆင်နွှဲရန် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ထောက်ခံမဲ ၇၉ မဲဖြင့် အတည်ပြုလိုက်သည်ဆိုခြင်း ( ၂ ) ကျင်းပဆဲ ကုလအထွေထွေညီလာခံက မြန်မာနိုင်ငံအား R2P ရေး ဆွေးနွေးရန် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ထောက်ခံမဲများဖြင့် အတည်ပြုလိုက်သည်ဆိုသည့် သတင်းဖြစ်သည်။
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်စွက်ဖက်ရန် ကုလသမဂ္ဂကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွင် ဆွေးနွေးမည့် သတင်းလောက် ထူးခြားသော သတင်းမရှိတော့ပါ။ သို့သော် လူအများ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေမည့် စက်တင်ဘာ ၂၀-ရက်နေ့ သတင်းကို ရက်သတ္တ ၁-ပတ်ကြာနီးပါးအထိ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘယ်တရား ဝင်မီဒီယာမှ ဖော်ပြခြင်းမရှိသည်မှာ အံ့သြစရာပင်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပုံ ထူးဆန်းလှသည်သည်ထင်၍ အထက်ပါ ( ၁ ) နှင့် ( ၂ ) တို့ မည်သည့်အတွက် ပြောဆိုကြသည်ကို လေ့လာသောအခါ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
( က ) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အကြောင်းအရာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည့်အဆင့်ရောက်ရှိရန် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ရှေးဦးစွာ အဆိုတင်သွင်းရပြီး ထောက်ခံ- ကန့်ကွက် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြရမြဲဖြစ်ပါသည်။
( ခ ) အထက်ပါသတင်းအတွက် အသုံးပြုသော ဓါတ်ပုံသည် အမှတ်စဉ် ၂ ပါ သတင်းအတိုင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဘယ်လ်ဂျီယန်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ Twitter စာမျက်နှာ တစ်ခုတည်းမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
( ခ ) အဆိုပါ Twitter စာမျက်နှာ၌ ရေးသားထားသည်မှာ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရာဇဝတ်မှု့ကျူးလွန်ခြင်း၊ Genocide ခြင်း၊ လူမျိုးသုတ်သင်ခြင်းကဲ့သို့ အတိမ်းအစောင်းမခံသော ခေါင်းစဉ်အတွက် ဘယ်လ်ဂျီယန်နှင့် ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီးများက အထွေထွေညီလာခံတွင် မဲပေးခဲ့သည်ဟု တွေ့ရပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား R2P ရန်ဟု ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (The Responsibility to Protect, the Prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. )
( ဂ ) ဘယ်လ်ဂျီယန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနကိုလည်း ရည်ညွှန်းထားပါ၍ ဆက်စပ်သမျှ ရှာဖွေရာ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် R2P မည်ဟု ရေးထားခြင်း မတွေ့ရပါ။
( ဃ ) ဥရောပသမဂ္ဂကလည်း ဘယ်လ်ဂျီယန်ကုလကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နည်းတူ R2P လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် မဲပေးခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့တစ်နေ့တည်းတွင် Twitter ၌ လွှင့်တင်ထားပါသည်။ မြန်မာကို တမင်ရည်ညွှန်းလျှက် R2P မည်ဟု ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။
( စ ) ထို့ကြောင့် အဓိကပင်ရင်းဖြစ်သော R2P Center Twitter နှင့် Portal အား လေ့လာရပြန်ပါသည်။
R2P စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ၁၅-ရက် စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၉ ရက်နေ့စွဲပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်
R2P Alert သတိပေးချက်တွင် အကျုံးဝင်နိုင်ငံများအား နီ၊ ညို၊ ဝါ အုပ်စု ( ၃ ) စု ခွဲထားပါသည်။
– မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဆီးရီးယား၊ ယီမင်တို့နှင့်အတူ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော အနီရောင်အုပ်စု၌ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၇ -ခုနှစ် သြဂုတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု့ကြောင့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟု ဖော်ပြ ) တို့ နယ်စပ်အား ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံအတွင်း ထွက်ပြေးရခြင်းဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
R2P က ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များတွင် ၂၇-မတ်လ၊ ၂၀၁၉ ရက်စွဲဖြင့် “ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကြောင်း သတိပေးချက် အမှတ် ၁၄၈၊ မာလီ၊ ယီမင်၊ မြန်မာ “ ဟု တွေ့ရှိရပါသည်။
R2P Centre ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဆိုင်မွန်အဒမ်က R2P Twitter ၌ ရေးသားရာတွင် ၇၄-ကြိမ်မြောက် ကုလအထွေထွေညီလာခံ၏ R2P လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ မြောက်ကိုရီးယား၊ မြန်မာ၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ နီကာရာဂွာ၊ ရုရှား၊ အီဂျစ်၊ အီရစ်ထရီးယားတို့ပါဝင်မည်မှာ သိသာကြောင်း၊ ၎င်းနိုင်ငံအားလုံးအတွက် ဘုံချမှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်မည်လား ဟု မေးခွန်းထုတ်ထားကြောင်း တွေရှိရပါသည်။
( ဆ ) ထို့ကြောင့် စက်တင်ဘာ ၁၇-ရက်နေ့ စတင်သော ကုလအထွေထွေညီလာခံ၌ R2P Centre က တင်သွင်းပြီး ၂၀ ရက်နေ့ ဆုံးဖြတ်သည်မှာ R2P Agenda လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအပေါ်၌သာလျှင် R2P မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်သလို အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများ၌ လုပ်ဆောင်ဖွယ်များလည်း ပါဝင်နေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မြန်မာအုပ်စုက ပို၍ နီးစပ်သည်။
( ဇ ) ကုလအထွေထွေညီလာခံသည် ၂၀၁၇-ခုနှစ်တွင် OIC တင်သွင်း၍ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား နိုင်ငံသားပေးရန် ထောက်ခံမဲအများစုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အထွေထွေညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရသည်မှာ လုံခြုံရေးကောင်စီ UNSC ဖြစ်ပါသည်။ UNSC ၁၅ နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၈ ဧပြီ ၂၈ မှ မေ ၁-ရက်နေ့အ တွင်း မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်-ကော့ခ်ဘဇား-ရခိုင်မြောက်ဖျားသို့ သွားရောက်လှည်လည်ခဲ့သည်။ ကော့ခ်ဘဇား ရောက်ရှိစဉ် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအမေးကို ဖြေကြားရာ၌ “လူမျိုးတစ်မျိုးအမည်နှင့် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် လုံခြုံရေးကောင်စီ၌ အခွင့်အာဏာမရှိ “ ဟုဖြစ်ပါသည်။
( ဈ ) အထွေထွေညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုံခြုံရေးကောင်စီအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အမြဲတန်းအဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံသည် ဗီတိုအခွင့်အာဏာဖြင့် ပယ်ချနိုင်သည်။ R2P ခံရမည်ဆိုသော မြန်မာနှင့် ရေမြေတစ်ဆက်တည်းရှိနေသော တရုတ်မှာ ဗီတိုသုံးစွဲခွင့်ရှိနေသည်။
( ည ) R2P သည် ကုလသမဂ္ဂခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအား စစ်ပြုရန် ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလခွင့်မပြုသော်လည်း ( ဥပမာ အမေရိကန်-ဗြိတိန်-ဆော်ဒီ-တူရကီ စသည်ဖြင့် ) တို့က မြန်မာကို သာမက အခြား မည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ပြုနိုင်သည်။ ထိုအခါ R2P ဟု သုံးစွဲ၍ မရတော့ပါ။ နိုင်ငံတကာ အကူညီ ရယူခွင့် မရှိတော့ပါ။ နိုင်ငံအချင်းချင်း စစ်ခင်းကြသည့်သဘော သက်ရောက်သွားပါသည်။
Htay Oung, Oung Marine
( စက်တင်ဘာ – ၂၆၊ ၂၀၁၉ ) အောက်ပါ Links များအား ကိုးကား ရေးသားသည်။
This morning, the @UN General Assembly adopted its agenda for #UNGA74.
Belgium 🇧🇪 andavast majority of member states voted to includeacrucial item:
👉 The Responsibility to Protect, the Prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.#R2P pic.twitter.com/xT7mxBxITs
— Belgium UN New York (@BelgiumUN) September 20, 2019
For the second time inaweek, #UNGA has voted in favour of including Responsibility to Protect in the agenda of its 74th session.
👉 There isaclear demand for more dialogue on #R2P and the #EU is fully committed to take its part.#R2P #EU4HumanRights pic.twitter.com/1aHezTqjKU
— 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) September 20, 2019
#UNGA is here! As world leaders gather in New York, follow along as we cover all things R2P and mass atrocity prevention this week!
Staff list: https://t.co/qpsCePFh5C#R2P at #UNGA47 pic.twitter.com/W7Fvink7hh
— GCR2P (@GCR2P) September 24, 2019
Previous Previous post: ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီပြဿနာ အဖြေရှာရေး ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ ရှိတ်ဟာစီနာ အချက် ၄-ချက်တင်ပြတောင်းဆို
Next Next post: ပယ်ဖျက်တန်ဖိုးမြင့်ငွေစက္ကူများ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်စိမ့်မြေတောတွင် ပြန်လည်တွေရှိ